Nabaddoon caan ahaa oo dhaawac Kismaayo ugu geeriyooday, ”Jubbaland ayaa shir-qooshay” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Nabaddoon caan ahaa oo dhaawac Kismaayo ugu geeriyooday, ”Jubbaland ayaa shir-qooshay”
Nabaddoon Axmed Jaamac Maxamuud (Qalyar)
Kismaayo (Halqaran.com) – Waxaa Magaalada Kismaayo ku geeriyooday Allaha u naxariistee Axmed Jaamac Maxamuud (Qalyar) oo ka mid ahaa odayaasha sida weyn looga garanayo Deegaanada Jubbaland.
Axmed Jaamac Maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeysay Nabadoon ahaa ayaa xalay u geeriyooday dhaawac bartamihii bishii September ka soo gaaray rasaas ay la dhaceen kooxo hubeysan.
Marxuum Axmed Jaamac Maxamuud ayaa waxaa toogtay laba nin oo aan la garanayn cidda ay ka tirsan yihiin, xilli uu ka soo baxay Masaajidka Suuqa weyn ee xaafadda Calanley.
Raggan ayaa waxaa la sheegay in ay ka baxsadeen goobtii ay ku toogteen Axmed Jaamac Maxamuud, iyadoona la sheegay in dhimasho ahaan ay uga taggeen, balse markii la arkay in uu nool yahay ay dadka deegaanka kula carareen isbitaalka weyn ee Kismaayo.
Allaha u naxariistee Nabadoon Qalyar ayaa ka mid ahaa Odayaasha Dhaqanka reer Jubbaland ee aan la dhacsanayn maamulka uu Madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe). Nabadoonka ayaa eedeymo kulul Warbaahinta u marin jiray Axmed Madoobe.
Ehelada marxuumka ayaa Maamulka Jubbaland horey ugu eedeeyay mid ka masuul ah dhaawaca culus ee loogu gaystay Bartamaha Magaalada Kismaayo.
Si kastaba, maamulka Jubbaland ayaa siyaabooyin kala duwan horey loogu eedeeyay in uu soo abaabulay dilal qorsheysan oo ka dhacay Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Jubbaland ayaa shir-qooshay